Famaritana marobe momba ny Moto G6 no voasivana noho ny GeekBench | Androidsis
Ny famaritana isan-karazany amin'ny Moto G6 dia tafaporitsaka noho ny GeekBench
Motorola, ilay orinasa amerikana nalain'ny Lenovo, dia nampiavaka azy indrindra tamin'ny iray amin'ireo andian-toekarena ara-toekarena sy mora vidy indrindra ... Miresaka momba ny andiany G misy azy izahay, amin'ity fotoana ity, Fampisehoana maro sy fika manokana momba ny Motorola Moto G6 no tafaporitsaka nohamafisin'ny tsaho maro fa nijinja efa ho herinandro maromaro ity terminal antonony ity.
Ity famoahana ity dia natolotry ny GeekBench, ny mari-pahaizana malaza sy ekena izay namoaka ny valin'ity finday ity omaly 23 feb. Azontsika atao ny manasongadina ny fisian'ny rafi-piasan'ny Android 8.0 Oreo sy ny processeur valo-fotony miaraka amin'ny 1.8GHz famantaranandro farafahakeliny, izay tsy mitovy raha ampitahaina amin'ny processeur octa-core 1.4GHz izay Moto G6 Play izay noresahintsika teo aloha.
Araka ny nomarihin'i GeekBench Benchmark, ny Moto G6, ankoatry ny Android 8.0 Oreo OS sy ilay chip noresahintsika tetsy ambony, izay mety ho ilay 450-nanometer Qualcomm Snapdragon 14 nambara tamin'ny taon-dasa, miaraka amin'ny RAM 2.856 3MB, izay, amin'ny farany, dia manodidina ny XNUMXGB.
Ho fanampin'izay, toy ny tsaho hafa efa niteraka momba ity finday ity, ny G6 dia ho avy amin'ny bateria 3.000mAh izany dia hanome antsika fahaleovan-tena somary mahazatra.
Mikasika ny isa, araka ny asehon'ity benchmark antsika ity, ny Moto G6 dia nahazo isa 709 tamin'ny fizarana tokana manohitra ny 472 izay nahafahan'ny Moto G6 Play nivoaka, ary, tao amin'ny multi-core dia nahatratra 3.582 teo ny isa Tsy toy ny 1.801 navoakan'ny zandriny ny 20 febroary.
Farany, tsy misy fantatra momba ny daty fampisehoana an'ity mid-range ity, na dia azo antoka aza fa ho hitantsika amin'ny fomba ofisialy amin'ity taona ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny famaritana isan-karazany amin'ny Moto G6 dia tafaporitsaka noho ny GeekBench
Ny safidy tsara indrindra amin'ny Swype for Android
Google Lens dia mifanaraka amin'ny fitaovana maro kokoa